Ukujoliswa komxholo: Ukwakha uKhuseleko lweBrand kwiXesha leeKuki | Martech Zone
Ukhuseleko lweBrand luyinto efunekayo kubarhwebi abaqhubela phambili kule meko yezopolitiko kunye nezoqoqosho kwaye banokuwenza umahluko wokuhlala kwishishini.
Iimpawu ngoku kufuneka zitsale intengiso rhoqo kuba zivela kwiimeko ezingalunganga, nge 99% yabathengisi abachaphazelekayo malunga neentengiso zabo ezibonakala kwiindawo ezikhuselekileyo zorhwebo.
Kukho isizathu esivakalayo sokuxhalaba
Izifundo zibonise iintengiso ezibonakala kufutshane nomxholo ongalunganga zikhokelela ku Ukuncitshiswa kwamaxesha 2.8 kwinjongo zabathengi ukudibana nezi brand. Ukongeza, isibini kwisithathu sabathengi, ababekade bebonise injongo ephezulu yokuthenga uphawu, babengenakufane bathenge uphawu emva kokuvezwa kwintengiso yenkampani efanayo ebonakala nomxholo ongalunganga; kunye nombono womthengi welo phawu wehle kasixhenxe.
Ukujolisa kumxholo: Uluhlu olutsha lwaBukrelekrele obunokhuseleko
Iindaba ezimnandi zezokuba, ukujoliswa komxholo kuqinisekisa ukhuseleko lophawu ngokuhlalutya umxholo kunye nokungabandakanyi ukubekwa nkqo kunye nomxholo obonwa njengongakhuselekanga. Ngokwenene ukusebenza kweenjini ekujolise kuzo ziyakwazi ukuqhubekeka zonke iintlobo zomxholo ezikhoyo kwiphepha, ukunika isikhokelo esinyanisekileyo se-360-degree malunga nentsingiselo yeli phepha.
Izixhobo ezilungileyo zivumela iindlela ezintsonkothileyo kunendlela elula yamagama aphambili, kwaye vumela abathengisi ukuba batyumbe imeko abafuna ukuyibandakanya, kwaye okona kubalulekileyo, abo bafuna ukubabekela ecaleni, njengomxholo usebenzisa intetho yentiyo, ubuhlanga, ubu politiki obandayo, ubuhlanga, ubutyhefu, stereotyping, njl.
Umzekelo, izisombululo ezinje nge-4D zenza ukuba ukungabikho okuzenzekelayo kwezi ntlobo zemiqondiso ngokudityaniswa okukodwa kunye namaqabane aneengcali ezinje ngeFactmata, kunye nolunye uphawu lweemeko lunokongezwa ukomeleza ukhuseleko apho kubonakala khona intengiso.
Ngaba indawo yakho yentengiso ikhuselekile?
Ukujolisa kumxholo ngaphaya kweNqaku
Abanye baqhubela phambili Ukujolisa kumxholo izixhobo zide zibe namandla okuqonda ividiyo, apho banokuhlalutya isakhelo ngasinye somxholo wevidiyo, bachonge iilogo okanye iimveliso, babone imifanekiso ekhuselekileyo yohlobo, enombhalo omanyelwayo owazisa konke, ukubonelela ngendawo efanelekileyo yokuthengisa ngaphakathi nangapha kwesi siqwenga somxholo wevidiyo. Oku kubandakanya, kubalulekile, yonke isakhelo ngaphakathi kwevidiyo, hayi isihloko kuphela, i-thumbnail, kunye neethegi. Olu hlobo lunye lohlalutyo luyasetyenziswa kuwo wonke umxholo womculo kunye nemifanekiso, ukuqinisekisa ukuba indawo iyonke ikhuselekile kraca.
Izixhobo ezindala zinokuhlalutya izihloko zevidiyo okanye iaudiyo, kwaye musa ukungena nzulu kwimifanekiso, oko kuthetha ukuba iintengiso zinokuphelela kwindawo engafanelekanga. Umzekelo, isihloko sevidiyo sinokuba msulwa kwaye sithathwe Khu selekile ngesixhobo esidala semeko, njenge Uyenza njani ibhiya enkulu Nangona kunjalo umxholo wevidiyo ngokwawo unokungalunganga kakhulu, njengevidiyo yabakwishumi elivisayo abakwishumi elivisayo abenza ibhiya-ngoku intengiso yophawu kwindawo leyo ayisiyiyo yomthengisi okwangoku.
Nangona kunjalo izisombululo ezinje 4D Bakhe indawo yentengiso yokuqala yokuthengisa eyenza ukuba amaqabane obuchwephesha bakhethe ii-algorithms zabo njengezinto ezongeziweyo zokujolisa, kunye namaqabane anje ngeFactmata anikezela ngeempawu zokhuseleko kwimixholo yobuhlanga, engafanelekanga, okanye enetyhefu kwaye inokusetyenziswa ukuqinisekisa ukhuseleko lophawu. kunye nokufaneleka kulawulwa ngokuchanekileyo.
Fumanisa ngakumbi malunga nokujoliswa komxholo kwiphepha lethu elimhlophe elimhlophe:
Ukujolisa kumxholo: Buyela kwikamva lokuThengisa
ISilverbullet luhlobo olutsha lweenkonzo zokuthengisa idatha-smart, eyilelwe ukuxhobisa amashishini ukuba afezekise ngokungafaniyo kweenkonzo zedatha, umxholo onolwazi kunye nenkqubo. Umdibaniso wethu wobukrelekrele bokuzenzela kunye namava oluntu abonelela ngolwazi lokunika amandla ukutshintsha kwakho kwentengiso kwikamva.
tags: ukhuseleko lophawuclickbaitiintengisoUkujolisa kumxholoUkwahlulahlulahlulaipolitiki enkuluyokufunda umatshiniisilivere yeebhulethiiingcinga ezizezinye
Izizathu ezi-5 zokuba undwendwe lufike kwiphepha lakho